Xiriirka Cuba-Cameroon: waqtiga diirimaadka - TELES RELAY
ACCUEIL » kale »Xiriirka Cuba-Cameroon: waqtiga diirimaadka
Xiriirka Cuba-Cameroon: waqtiga diirimaadka
9 Sebtember 2019 waxay haysay hawada "maalin sharaf" saacad kahor, oo laga arkay wefti uu hogaaminayo Rogellio Sierra Diaziello.
Booqashada Yaoundé, Kuxigeenka Kuxigeenka Arimaha Dibada iyo kuxigeenkiisa waxay runtii xaq uleeyihiin casho dowladeed oo ay martigelisay dowlada Cameroon.
Ka xallinta dhoola cadeynta iyo isweydaarsiga diiran ee lagu xusay muddadii uu socday gudoominta Lejeune Mbella Mbella, Wasiirka Xiriirka Dibadda ee Cameroon (Minrex), waxaa jira xiriirro xoogan oo u dhexeeya Yaoundé iyo Havana. Rogellio Sierra Diaziello wuxuu ku qirtay asxaabteena shaqada anteenada TV-ga ee Crtv, Rogellio Sierra Diaziello ayaa qirtay meel kale.
«Labadeena dowladood waxay ku tala jiraan inay dhisaan xiriiro adag, oo leh qorshe caalami ah iyo go’aamo shan qodob ah: sameynta iskaashi ku saleysan sinnaan, wadatashi iyo isfaham, wada-shaqeyn iyo wax wada qabsi; raadi furnaan, hal-abuurnimo, loo dhan yahay oo waxtar u leh dadka oo dhami; kor u qaadida isweydaarsiga iyo kobcinta wadajirka ah; kor u qaadida iskaashiga; wanaajinta hababka iskuduwidda ee horumarkaAyuu yidhi Rogellio Sierra Diaziello.
Waxaas oo dhan waxay u horseedeen inuu carrabka ku adkeeyo asalnimada xiriirka Cameroon iyo Cuba: "Kuwani waxay soo bandhigaan wajiga wejiga midaysan ee ka hortagga horumarka".
Marka loo eego unugga isgaarsiinta ee Minrex, aragtidan waxaa lagu dabaqayaa macnaha guud ee iskaashiga meelaha Cuba ay safka hore kaga jirto sida bayoolaji ahaan. Si arrintaas looga hadlo, Kuxigeenka Kuxigeenka Arrimaha Dibadda wuxuu cadeeyay in qeybta kor ku xusan, waddankiisu safka hore kaga jiraan baaritaanka. "Wuxuu leeyahay shaqaale aad u xirfad badan, aadna u tababaran. Waxaan damacsan nahay inaan arintan wax ku kordhinnoWuxuu ku daray.
Hirgelinta himilooyinkaan, HE José Antonio Garcia Gonzalez ayaa hadda la geeyay madaxa safaaradda Cuba ee Yaounde.
3 bishii Sebtember ee la soo dhaafay, dibloomaasiyiinta ayaa u soo bandhigay nuqulo ka mid ah shahaadooyinkiisa Minrex. Waxaa xanaaqsanaa in kabadan sannadihii 20, waa bishii Maajo 2005 in axdigii Yaoundé-Havana uu ku nastay isweydaarsiga danjiraha.
Wadahadalka qaran ee ugu weyn ee uu qabtay Paul Biya: Meesha rasmiga ah ee MRC waxaa lagu ogaan doonaa saacado kooban gudahood
Wadahadalka Grand National: Me Akere Muna waxay soo jeedineysaa in doodaha oo dhan laga sii daayo raadiyaha iyo telefishanka
Football Ligue des Champions – LdC : Le tifo de Dortmund entre dans la légende ! – FOOT 01
Maxkamad ku taal California ayaa taageertay xukunka awoowgiis Jan Crouch ee ah in ay canaanatay wariyaha telefishinka ka dib markii la kufsaday - dadka
DADKA & LIFESTYLE4,614